प्रचण्डहरुले लाजमर्दो बनाए भन्दैं गठबन्धनबाट बाहिरिदैं गठबन्धनका एक शीर्ष नेता, गरे यस्तो घोषणा ! – GALAXY
प्रचण्डहरुले लाजमर्दो बनाए भन्दैं गठबन्धनबाट बाहिरिदैं गठबन्धनका एक शीर्ष नेता, गरे यस्तो घोषणा !
भागबण्डा र स्वार्थमा मरिहत्ते गरिरहेका गठबन्धनका नेताहरुबीच टकराव देखिएको छ । त्यही पदका लागि गठबन्धनभित्र रडाको मच्चिएको हो । यहीकारण गठबन्धन फुट्ने मोडमा आइपुगेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा गठबन्धनका शीर्ष नेता चित्रबहादुर केसीले गठबन्धन छाड्ने संकेत गरेका छन् । उनले भागवण्डा नमिेकै कारण मन्त्रीपरिषद विस्तार ढिलो भएको भन्दै यस्तो अवस्था आउनु लज्जास्पद भएको बताएका हुन् ।
ओटीभी नेपाल डट कम सँगको विशेष कुराकानीमा अध्यक्ष केसीले सरकार बनेको यतिका लामो समय सम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नु अन्यन्तै नराम्रो कुरा भएको बताएका छन् । भागवण्डाकै कारण मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्दा बाहिर गलत सन्देश गएको पनि उनले बताए ।
कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष केसीले सरकारले गर्ने नराम्रा काममा राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिन नसक्ने भन्दैं गठबन्धन छाड्ने संकेत गरेको छ । प्रतिगमनका विरुद्ध मात्रै देउवा, प्रचण्डहरुलाई आफुहरुले साथ दिएको र सबै नराम्रा काममा आफ्नो हिस्सेदारी नहुने उनले उनले प्रष्ट पारे ।
प्रतिगमनका विरुद्ध लडेर पुरानो सरकार हटाएर नयाँ सरकार बनाउँन सक्ने तर सरकार बनिसके पछि मन्त्रीपरिषद समेत विस्तार गर्न नसक्ने यसले त जनतामा निकै नराम्रो सन्देश दिएको उनले बताए । भागवण्डाको किचलोमा आफ्नो पार्टी टाढै रहेको पनि उनले पनि बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि आफुहरु प्रतिपक्षीमै बसेको भन्दै केसीले सरकारलाई समर्थन मात्रै होइन खबरदारी पनि गरिरहेको बताए । प्रतिगमनलाई पररास्त गर्नका लागी मात्रै अहिलेको गठबन्धनमा सहभागी भएको भन्दै उनले सरकारले गर्ने नराम्रा कामको भारी आफुले बोक्न नसक्ने प्रष्ट पारे ।